Vaovao - Amin'ny taona 2050, ny fiara elektrika dia hanjaka amin'ny varotra fiara
Araka ny filazan'i Wood Mackenzie, ho 875 tapitrisa ny fiara mpandeha elektrika, 70 tapitrisa fiara ara-barotra elektrika ary 5 tapitrisa fiara mandeha amin'ny solika eny an-dalana amin'ny 2050. Amin'ny tapaky ny taonjato dia hahatratra ny totalin'ny fiara tsy misy emission miasa. 950 tapitrisa.
Ny fikarohana nataon'i Wood McKenzie dia manoro hevitra fa amin'ny taona 2050, telo amin'ny fiara dimy ao Shina, Eoropa ary Etazonia no ho herinaratra, ary saika ny iray amin'ny fiara ara-barotra roa any amin'ireo faritra ireo no ho herinaratra.
Tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2021 fotsiny dia nitombo hatrany amin'ny 550,000 ny fivarotana fiara elektrika, nitombo 66 isan-jato tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Ny fiverenan'i Etazonia amin'ny maha-mpitarika ny toetr'andro sy ny tanjona aotra ho an'i Shina no tena zava-dehibe amin'ity fiakarana ity.”
Vaovao ratsy ho an'ny fiara diesel ny fiakaran'ny vidin'ny fiara elektrika. Ny fivarotana fiara gilasy, anisan'izany ny fiara hybrid mini/maivana, dia hihena ho latsaky ny 20 isan-jaton'ny varotra manerantany amin'ny 2050, hoy i Wood McKenzie. Saika ny antsasaky ny fanisana fiara misy ranomandry sisa dia ho any Afrika, Afovoany Atsinanana ary Amerika Latina, ary koa any Rosia sy ny faritr'i Caspienne, na dia tsy nisy afa-tsy 18 isan-jaton'ny fitambaran'ny fiara maneran-tany aza ireo faritra ireo tamin'io taona io.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiara elektrônika, ny isan'ny famandrihana eran-tany dia antenaina hitombo ho 550 tapitrisa amin'ny tapaky ny taonjato. Ny ankamaroan'ny (90 isan-jaton'ny) amin'ireo toeram-pivarotana ireo dia mbola ho mpanentana an-trano. Ny fanohanan'ny politika, anisan'izany ny famatsiam-bola sy ny fitsipika, dia hiantoka ny fitomboan'ny tsenan'ny fiampangana EV mifanaraka amin'ny fiara.
Tamin'ny taona 2020, ny totalin'ny fanafarana sy fanondranana entana fiara dia 151.4 lavitrisa dolara amerikana, nidina 4.0% isan-taona, ary 933.000 ny fitambaran'ny fanafarana fiara, nidina 11.4% isan-taona.
Raha resaka kojakoja fiara dia tsy kely ny fitomboana tamin'ny Desambra 2020. Ny sandan'ny fanafarana kojakoja fiara dia US $ 3.12 lavitrisa, miaraka amin'ny fitomboana isam-bolana 1.3% ary fitomboana isan-taona 8.7%. Tamin'ny taona 2020, ny isan'ny fanafarana kojakoja fiara sy kojakoja dia US $32.44 miliara, niakatra 0.1% isan-taona.